European Union nenyika dzinoti Australia, Canada neAmerica, dziri kushora kushatyorwa kwekodzero dzevanhu nehurumende.
Vamiriri venyika dziri European Union muZimbabwe dzinoti France, Germany, Greece, Netherlands, Romania, Sweden neUnited Kingdom, vakabatana nevamiriri venyika dzinoti Canada, Australia neAmerica, vaburitsa gwaro rinoshoropodza kushandiswa kwechisimba mukutyorwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe.
Vamiriri ava vanoti hurumende yeZimbabwe yakashandisa chisimba, mukutyora kodzero dzevanhu pamwe neshungurudza vanhu munguva yekuratidzira kwakaitwa musi wa16 Nyamnavhuvhu, uye mushure mekuratidzira uku.
Gwaro raburitswa iri rinoti nyika idzi dziri kushushikana zvikuru nekushungurudzwa, kurohwa pamwe nekutyorwa kwekodzero dzevatungamiri vemasangano evashandi, vemapato anopikisa, uye vemasangano akazvimirira.
Vamiriri venyika idzi vari kukurudzira hurumende yeZimbabwe kuti iremekedze kodzero dzekuungana kwevanhu pamwe nekuti varatidzire, uyewo kukurudzira vemapato ezvematongerwo enyika kuti vasiyane netsika yekutyisidzira vamwe kana kukurudzira mhirizhonga kana kuparadza midziyo nezvivakwa.
Asi hurumende, kuburikidza nebazi rezvekuburitswa kwemashoko, inoti inoshamiswa kwazvo nedanho ratorwa nenyika idzi rekupindira munyaya dzeZimbabwe panyaya yekuratidzira kwainoti kwaive kunze kwemutemo kwakaitika musi wa 16 Nyamavhuvhu, 2019.
Munyori webazi rezvekuburitswa kwemashoko, VaNick Mangwana, vaburitsawo mashoko anoti gwaro renyika dzekumawirira iri harina kuda kutaurawo pamusoro pemutongo wakapiwa nedare redzimhosva repamusoro, reHigh Court pamusoro penyaya yekuratidzira iyi.
VaMangwana vanoti mutongo wedare repamusoro unoreva kuti hapana zvimwe zvaizokwaniswa kuitwa mushure mazvo.
VaMangwana vanoti Zimbabwe yakazvipira kuona kuti yagadzirisa zvinodiwa kuti munyika muve nekugadzikana mune zveupfumi nezvematongerwo enyika.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika, Doctor Victor Chimhutu, avo vanodzidzisa pa Bergen University ku Norway, vanoti zvinhu zvavanotarisirawo kuti nyika dzinodyidzana neZimbabwe dzinge dzichiisawo ziso pane zvinenge zvichiitika muZimbabwe.
Doctor Chimhutu vanoti chinonyanyotambudza ndechekuti kutyorwa kwekodzero dzevanhu kuri kutonyanyisa munguva yehurumende yaVaEmmerson Mnangagwa kana zvichienzaniswa nenguva yehutongo hwaVaRobert Mugabe.
Asi vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZanu PF, VaGadzira Chirumhanzu, vanoti zvinozivikanwa kuti vachena venyika dzekumawirira ava vagara vachida kushungurudza Africa, uye kuba hupfumi kubva munyika idzi, saka vachida kupindira munyaya dzenyika dzemuAfrica.
VaChirumhanzu vanoti chinovashamisa ndechekuti vachena ivava ndivo vanoda kudzidzisa Zimbabwe pamusoro pekodzero dzevanhu, kwete kuti Zimbabwe itungamire yoga munyaya dzekodzero dzevana vayo.